सोचीमा आवास 2021 बिना दुर्घटना, फोटो र हेस्नागुगा बिना कुनै पौंडी पोखरी, फोटो र समीक्षा बिना सोचीको आवास हटाउनुहोस्। तिमी.त्य
अनुग्रह ग्लोबल कन्फर्मेड र स्मा *
सोचि होटलहरू सबै वर्ष काम गर्दै, रिसोर्ट पाहुनाहरू बीच धेरै लोकप्रिय छन्। यदि तपाईं समुद्रको आधारमा सबै प्रणालीमा होटल खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यसको आफ्नै समुद्री तट होटल एक अविस्मरणीय छुट्टीको लागि उत्तम विकल्प हो। यहाँ तपाई आफ्नो कोठाबाट कालो समुद्रको सही उपकरणको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। समुद्री सतहमा सोचीको सानो होटल र होटलहरूले बाहिरी पोखरीमा हाम्रो होटेललाई चकित पार्नेछन्।
तपाईंको सेवामा तपाईंको सेवामा:
<। li> Aerry
स्नेह, कालो समुद्र र कोस्ट्रेटलाई ग्रान्ड बिच होटल मोतीमा कोस्ट्रेट 30000 मिटर आनन्दित गर्नुहोस्। तपाईं किनारमा ठाउँ आफैंमा ठाउँ रोज्न सक्नुहुन्छ वा सजिलो दक्षिणी सूर्यबाट टेढोरको छायामा आराम गर्नुहोस्।
भ्रमणको लागत - हप्ताको बिषयहरू - 1000 रूबल दिनको 1000 रूबलहरू एक (समुद्री तट पोखरी) - 1 1400 रूबलहरू एक दिन
UL> ठूलो POL
Pool लम्बाई m0 मिटर
पानीको लाइट स्प्युशसन
समुद्री पानीको साथ खुला तटत पोखरीमा पौडी खेल्ने अवसरको आनन्द लिनुहोस्। परिसर लाउन्जमा झुठो आराम गर्नुहोस् र उष्णकक्शन बारबाट एक स्फूर्तिदायी ककटेललाई अर्डर गर्नुहोस्। यस इलाकामा पनि बच्चाहरूको लागि एउटा सानो पोखरी छ, जहाँ होटेल एनिमेसन टीम बच्चाहरूसँग काम गर्न खुशी हुनेछन्। साँझको समय पानी अगुवाईको कारण मोडियो। Assayn एक आधुनिक फिल्टरिंग प्रणाली संग सुसज्जित छ। ठूलो पोखरीमा पौडी खेल्ने काम वा पानी पोलो बिताउने क्षमता।
भ्रमणको लागत: साप्ताहिने दिन - 1000 रूबल दिनहरू (1000 रूबलहरू एक माडार (1000 रूबल) - 1 1400 रूबलहरू एक दिन
बच्चाहरू5देखि 10 बर्षको उमेरका बच्चाहरू - 500% छुट छ - नि: शुल्क उपलब्ध छ - निःशुल्क (एक वयस्कको साथ)
बढ्दो, रूसीहरू सोचीमा गर्मी छुट्टीहरू मन पराउँछन् र प्रसिद्ध रिसोर्ट क्षेत्र - एडलर छनौट गर्छन्। निजी क्षेत्रको समुद्री किनारमा समुद्री क्षेत्रबाट पोखरी र आरामदायक आँगनहरूको साथ फैशनेबल होटलहरू बीचको गर्मीको मौसममा छुट्टाछुटीहरू मनाइरहेका छन्। जब मनोरन्जन योजना जब पर्यटकहरू प्राय: भाडा कोठाको लागि पौडी खेल्ने पोखरीको साथ अक्सर तातो खोज्दैछन्।
समुद्री सतहमा इनडोर पोखरीको साथ एडवर्डलाई रिसाइज गर्न। यदि तपाईंले एक अतिथि घर छनौट गर्नुभएको छैन भने, यसलाई पोखरीमा समुद्री सतहमा एडलर र होटेलमा खोज्नुहोस्।
कालो समुद्री रिसोर्टहरूमा आराम गर्मीमा मात्र सुखद छैन। अफसेसनमा आउनुहोस् र होटलहरूमा बस्नुहोस् जहाँ तातो पोखरीहरू छन्। हामी सोची र एडलरका सर्वश्रेष्ठ होटलहरूको बारेमा बताउँदछौं, हामी भ्रमण र आवासको लागि मूल्य दिन्छ। छनौट गर्नुहोस्!
मूल बजेट होटल, केन्द्रीय एडलर छिमेकको होटेलको 200 मिटर 200 मिटर "समुद्री किनारमा" क्याफेडहरू, रेस्टुरेन्टहरू र पसलहरूको नजिकै। अफ-मौसमा, पाहुनाहरू भित्री तातो पोखरीमा नुहाउँछन्, र तातो मौसममा - आउटडोर आकाश मुनि। रिसोर्टको मुख्य आकर्षणहरूमा यस्तै पर्यटकहरू यो हिंड्न सजिलो छ।
ठूलो सोचीमा सब भन्दा सस्तो होटलहरू मध्ये एक, जुनसँग एक बाहिरी तातो पोखरी छ, एडलेरमा अवस्थित छ, 1 किलोमिटबाट एडलटटत समुद्री किनारमा अवस्थित छ। गिरावट र जाडोमा, जब कूल, समुद्री किनारमा हिंड्छ, तातो पानीमा राम्रोसँग पौडिनुहोस्। बच्चाहरू भएका अभिभावकहरू, एक trapbine र बच्चाहरूको प्लेरूम को साथ एक फिटनेस क्षेत्र, एक सुन्दरपाल निजी पार्क संग खुसी छन्।
<< p> एक राम्रो समाधान - हरियो वर्ग बेस्टमेवोरको छेउमा एडलर को केन्द्रबाट टाढा रहनुहोस्। होटेलको व्यवसाय केन्द्र, क्यारियर र नि: शुल्क पार्किंगको लागि खेल मैदान हो। पाहुनाहरूले रेस्टुरेन्ट र बार को उत्कृष्ट अपरेशन नोट गरे। यदि तपाईं गर्मीमा आइपुग्नुभयो भने, समुद्री र घाँटीमा पौडिनुहोस् र होटलबाट 200 मिटर 200 मिटर 200 मीटरहरूमा। जाडोमा साचीमा आराम गर्नेहरूका लागि तातो पानी र तातो टबको साथ उत्कृष्ट पोल छ।
<< p> ठूला सोची डिज्नी कार्टुनबाट एक जादुई क्यासल जस्तो देखिन्छ। आरामदायक र आरामदायक होटेल बच्चाहरूसँग मनोरञ्जनको लागि रिसोर्टमा सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ। प्रत्येक कोठामा व्यक्तिगत डिजाइन हुन्छ। तातो पानीको साथ इनडोर पोल पनि मूल देखिन्छ - सूर्यको ठूलो छवि निलो दिनमा देख्न सकिन्छ। तपाईं एक परी कथा जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ!
बिहानको खाजामा डबल कोठा। 6500 रूबलहरू, भ्रमण - 47 47,50000 रूबलबाट। मूल्यले लोकप्रिय सोची पार्कको टिकट समावेश गर्दछ।